ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: အထင်လွဲတော့ အကျိုးနည်း
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, January 19, 2010
kokomaung.uk January 19, 2010 at 5:22 PM
လူတွေဟာလဲ ဒီလိုပါဘဲ။ ဘာမဟုတ်တာလေးကို ပုံကြီးချဲ့ ပြီး ဒေါသထွက်တတ်ကြတယ်။
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ... တခါမှ မဖတ်ဖူးဘူး
MMon January 19, 2010 at 7:14 PM
သီဟသစ် January 19, 2010 at 9:26 PM
အင်း သင်ခန်းစာ ယူစရာပါပဲဗျာ
မျှဝေပေးလို့ကျေးဇူးပါ ပန်းကဗျာနဲ့ မေ ၁၆ တို့ေ၇
တောင်ပေါ်သား January 19, 2010 at 10:17 PM
စိတ်ယုတ်မာမွေးက ဆိုးကျိုးတွေပဲ ဖြစ်လာမှာပါပဲ ဖတ်သွားပါတယ်း)
မကေ January 20, 2010 at 2:35 PM
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ် ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတာ သင်ခန်းစာ ယူစရာပဲနော်
ကိုလူထွေး January 21, 2010 at 1:04 AM
ဟုတ်ကဲ့.. ဟုတ်ကဲ့... ဟုတ်ကဲ့...... အခုအချိန်ကစလို့ စိတ်ကောင်းမွေးပါတော့မယ် ခင်ဗျား...
ဇွန်မ January 21, 2010 at 8:41 AM
မထားသင့် မထားအပ်တဲ့ အငြိုးအတေးတွေကြောင့် အကျိုးမရှိ ဆုံးရှုံးကြရတယ်ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာလေး မှတ်သားသွားတယ် အမရေ။
ဒဏ္ဍာရီ January 21, 2010 at 6:20 PM
အဆုံးအမ သင်ခန်းစာလေးပဲနော်။ စိတ်ထားကောင်းရင် ကံကောင်းမယ်ဆိုသလိုပေ့ါ။ စိတ်ထား မကောင်းတော့ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ရတယ်နော်။
ကျေးဇူးပါ မမရေ..။ မှတ်သားသွားပါတယ်။
မိုးစက်အိမ် January 22, 2010 at 3:11 AM
ဘာမဟုတ်တာလေးကို ရန်ညှိုးဖွဲ့ တော့ နှစ်ဦးလုံး
ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်မရှိတဲ့သူတွေဒီလိုပဲသူများလိမ်လည်လှည့်စားတာကိုခံကြရတာပါ...စိတ်ထားကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ...၀က်ဝံသည်တရိစ္ဆာန်မို့ ဦးနှောက်မရှိ...ရုက္ခစိုးကလည်းတရိစ္ဆာန်နဲ့ ဖက်ပြိုင်တဲ့ဘာအသိဥာဏ်မှမရှိတဲ့သတ္တ၀ါ...သနားစရာကောင်းလိုက်ပါဘိတော့တယ်...။
ညရဲ့ကောင်းကင် January 26, 2010 at 10:06 PM
အင်း စိတ်မထားတတ်တော့ ပျက်ဆီးခြင်းကို ရောက်ကုန်တာပေါ့...
ပန်းခင်းလေး January 27, 2010 at 9:00 AM
ဘာမဟုတ်တာလေးကို ပုံကြီးချဲ့ လွန်းတတ်တဲ့ 
အဖြစ်တွေက လက်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း
မြင်တွေ့ နေရတယ်မမရေ . . .
ဘာပဲပြောပြော “ကိုယ်ပြုတဲ့ ကံ ပဲတင်သံ
ကိုယ့်ထံပြန်လာ၏” တဲ့ 
ဆိုးတာလုပ်ရင်တော့ ဆိုးတာပဲရမှာ . . . :)
ချွန်တွန်း အလုပ်ကောင်းတာ ခံပေါ့။
မြတ်စုလှိုင် January 29, 2010 at 3:07 PM